Gorfeyn Iyo Guud-mar: Dhiganaha “Habeen Kaama Tegin” W/Q Siciid Maxamuud Gahayr | Somaliland Today
← Waano Wasiir ………. W/Q: Baxnaan xaaji aden diiriye
19 Arimood oo Madaxwaynaha laga Sugayo. Garyaqaan Rajab ismail Salah . →
Gorfeyn Iyo Guud-mar: Dhiganaha “Habeen Kaama Tegin” W/Q Siciid Maxamuud Gahayr
3dii Jenewari 2017ka oo aan magaalada Gebiley kaga qayb-galnay bandhigga labada buug ee “Habeen kaama tegin” iyo “Sheekaba sheekay keentaa” ayuu gacantayda soo galay diiwaanka magaciisu yahay “Habeen kaama tegin”. Muddadaas oo gu’ buure ah iyo lix maalmood laga joogo waxa aan damacsanaa in aan faallo ka qoro. Laakiin malaha dabaylihii siyaasadeed iyo doorashadii dalka ku hadhaysnaa ayaa dib u dhigay.
Wax uu wakhtigu is-guraba caawa oo sooyaalku yahay 10kii Jenewari 2018ka ayaa ay suurtagal noqotay in aan cabbiro aragtidayda ku aaddan diiwaanka “Habeen kaama tegin”.Labada buugba waxa sannadkii 2016ka qortay Amal Gilin Maxamuud oo ka mid ah qoreyaasha iyo aqoonyahannada dhallinyarada ah ee ku nool magaalada Hargeysa.
ahaanna dhiganaha “Habeen kaama tegin” waxa uu xambaarsan yahay kow iyo toban sheeko. Bogagga hore ee 4 illaa 14 waxa ku qoran xuquuqda qoraalka, hibayn, afeef, tusmada buugga, hordhac, mahadnaq iyo magaca buugga. Boggaga illaa 16aad illaa 14aad ayaa ay dulucdiisu ku jirtaa. Boggaga 134 illaa 150 waxa ku qoran taariikhda qoraha, weedhihii buugga laga yidhi, hal-ku-dhegga buuuga iyo tixraaca ilaha xigashada.
Dhiganahani waxa uu duub ahaan xambaarsan yahay ka kooban yahay labada qaybood ee sheekooyinka: sheeko dhab ah iyo sheeko male-awaal ah, kuwaas oo loo gudbinayo hab sheeko ah. Waxa lagu qoray af la fahmi karo, sheekooyinka qaarkood aad ayaa ay u xiise badan yihiin oo hannaanka loo tebiyay ayaa heer sarreeya sida sheekada “Waan kuu imide kac” oo ku qoran bogagga 24 illaa 37. Waxa aad ka xiise-goyn kartaa marka aad wada akhridid ee aad si buuxda u dhuuxdid dulucdeeda. Weliba sheekadaas aan goonida u taabtay waxa biyo-dhaceeda fahmi kara uun qof si dhammays iran u dheehday. Akhirsteyaasha waxa aan Hal-xidhaale uga dhigayaa in ay doontaan dhiganaha oo ay dhaayahooda saaran sadarrada iyo salka sheekada aan guud-marka ku dhaafay.
Sheekooyinka ama abbaaraha (mawduucyada) uu dhiganuhu faaqidayo waxa aad magacyadooda ka garan kartaa in ay xambaarsan yihiin guubaabo togan sida “Farxad ku tali, Noqo saaxiib wanaagsan, dhaqankeennii suubbanaa oo sal guuday, aammusnaani waa dahab, noqo shinni ee ha noqon dukhsi, aargoosigu waa uf iyo baraarug”. Kuwo badan waxa ku ladhan murti, maanso iyo suugaan ay bulshadu si fiican u kasi karto ujeedkooda iyo nuxurkooda.
Qiimaha buugga waxa kuu muujinaya weedhaha ay ka yidhaahdeen indheer-garadka ummadda ee buugga arkay intii aan la daabicin sida Bare Sare/Qoraa Maxamed Sheekh Ibraahin Xujaale, Abwaan Jaamac Cali Xasan (Gaashaan-cadde) Guddoomiyaha Machadka Afka iyo Dhaqanka ee Jaamacadda Golis, Nimcaan Cabdi Cali Guddoomiye ku-xigeenka Jaamacadda Golis iyo Qoraa Cabdinaasir Axmed Ibraahin. Weedhahooda dhiirri-gelinta ah waxa aad ka dareemaysaa in Qoraa Amal Gilin Maxamuud ay u talo-badsatay tayaynta dhiganaha.
Walaw uu dhiganahani ka mid yahay kuwii koowaad ee ay qortay Amal Gilin Maxamuud waxa aad dareemaysaa in bar-bilawgeedu yahay mid bogaadin mudan. Ma hawl yara in buug la qoraa, Amal waxa ay hurtay maskax, muruq, maal, mirir (wakhti) iyo dedaal mug leh, waana waxa horseedka u noqday in ay horteenna keento diiwaan aan qof ahaan majeeranayo. Waxa aan ku guubaabinayaa in ay kaalintaas ku sii jirto, isla markaana ay xilkasnimadeeda uga sii faaiidayso dadka afka Soomaaliga ku hadla.
Sidaas oo ay tahay, wax uu aadame qabtay lagama waayo dhaliil. Laakiin mar kasta oo uu qofku faraha ku sii hayo qalinka iyo qoraalka waxa uu sameeyaa koboc iyo horumar. Waxa aan ku kalsoonahay in Amal Gilin Maxamuud ay ururisay wixii faallo taban ah ee dhiganaha laga yidhi, isla markaana ay toosintooda gacanta ku hayso, waayo hadda waa dhigane laba jirsaday. Mar walba intiisa togan ee tayada leh ayaa boqol lab tiro badan. Waa dhigane taabba-galay, tisqaaday isla markaana mudan in wakhti loo huro akhriskiisa.
Ugu dambayntii waxa aan leeyahay Amal Gilin Maxamuud waxa ay tusaale iyo hiraal u tahay da’yarta doonaysa in ay ummaddooda la wadaagaan aqoonta san, gaar ahaanna bahda jecel qoraalka, akhriska iyo dhaxal-reebka ummadda. Akhriste kasta oo aan dhaayaha saarin diiwaanka “Habeen Kaama Tegin” waxa aan leeyahay “nala arag mucda iyo miidda ku duugan”.